Silsiladda Tram Silkworm ee maxalliga ah ayaa bilaaban doonta safarka berri | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaSilkworm Tramway Tramway wuxuu bilaabmaa safarro berrito
11 / 10 / 2013 16 Bursa, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY, taraamka
Native berri Silkworm taraamka bilaabmaa waqti safarka: Bursa Metropolitan soo saaray ee degmada talinta iyo 6,5 kiiloomitir naqshad-Garage oo ka shaqeyn doonaan taraamka horeysay wadaniga line ee T1 Turkey 'Silkworm' berrito (Sabti) ​​saacadood bilaabmaa safarka duulaan ku 11.00 ah.
Iyada oo hoos imaanaysa kormeerka Dawlada Hoose Durmazlar madhin iyo buuxiyeen inta badan soo saaray shirkadda guul u soo dhammaystay imtixaanka wadista Turkey ee taraamka ugu horeeyay ee maxalli 'Silkworm socdo bilaabmaa on duulaan ku. Safarkii ugu horreeyay ee İpekböceği, oo muujinaya awoodda injineernimada Turkiga, waxaa furmi doona Madaxweyne Recep Altepe oo ku taal Kent Square berrito 11.00.
Bursa waxay markii hore u timid ajandaha 1904, laakiin laguma guuleysan karin qaab lagu hirgaliyo taraamka korantada si loogu noolaado farxadda Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Recep Altepe, labadaba taraamka maxalliga ah iyo khadka taraamka ee magaalada, waxay xusuusteen inay sameeyeen marka hore. Duqa magaalada Altepe, oo la wadaagay macluumaadka laga soo uruuriyay taariikhihii taariikhiga ahaa ee Bursa, ayaa yidhi, “1904, Hacı Kamil Efendi Zade Arif Bey wuxuu dalbaday inuu sameeyo oo ka hawl galo taraam koronto koronto halkii uu gaari faras-farax ku soo qaadi lahaa Bursa. Markii tani aysan dhicin, xuquuqda ay u leedahay inay dhisto oo ku shaqeyso taraamyada korantada ayaa dowladda hoose ugu wareejisay degmada. 17 Bishii Febraayo 1905, Mehmed Ali Agha, ina Süleyman oo ka soo jeeda Ashgudere, wuxuu ka dalbaday degmad ahaan inuu kafaalo qaado rakibaadda iyo howlgalka taraamka. Sida ku xusan tilmaamaha, shirkadda waxaa la aasaasay laba sano gudahood dhismaha dhismaha ayaa la bilaabay, laakiin shuruuda lama fulin.20 Bishii Sebtember 1909, Aşkudereli Mehmed Ali Ağa wuxuu ku wareejiyay xuquuqda degmada. Iyada oo ay sabab u tahay hindisada soo noqnoqda, waxaa heshiis la saxiixay Oropedi Mauri Matis Efendi bishii Luulyo 12. Wadooyinka khadadka taraamka ayaa la furay oo agabkii la bilaabay in la dhammeeyo. Dhismaha warshadaha halkaas oo koronto looga baahan yahay taraamyada la soo saari doono ayaa qayb ahaan la dhammeeyay. Markii Dagaalkii Koowaad ee Caalamku soo dhexgalay, heshiiska ayaa la joojiyey oo heshiiskii dib loogu celiyey degmada. Dagaalkii Koowaad ee Adduunka ee 1913 ka dib Bishii Juun 23, waxaa la aasaasay shirkad la yiraahdo Bursa Cer, Tenvir iyo Kuvve-i Muharrike-i Elektrikiye Türk Anonim Şirketi. Isla sanadkaas, dhismihii korantada ee ugu horreeyay, warshada taraamyada iyo dukaamada dayactirka, oo ah dhismaha maanta ee Tedaş, ayaa la sameeyay. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah xaqiiqda ah in korantada la soo saaray ay ugu horreyso loo isticmaalo warshadaha, natiijadii la rabay ee taraamka lama helin. Sida ku xusan heshiiska ugu dambeeyay ee lagu saxiixay 1924, xariiqda 1924 waxaa loo go'aamiyaa sidii 4 qasab ah iyo 5 la doorbiday wax natiijo ahna lama gaari karo. Waxaan ku faraxsanahay inaan keenno khadka taraamyada ee awoowayaasheen bilaabay shaqooyinkiisa qarni ka hor Bursa kadib sannadihii 9. Waxaa laga yaabaa inay anfacdo dhammaan dadkeenna ”.
Riyadii da 'da ahaa ee dadka maxalliga ahi waxay bilaabeen inay qaadaan safarka taraamka ee xaafadda (Photo Gallery)
Hantidii Aasaasiga ah ee 'Ironworm'
Rugta Ganacsi ee Silkworm oo Lagu Dhiibay Maalmihii Ugu Danbaysay Booqashooyinka Waddooyinka Bari (Video)
Trampled Domin Silkworm 3 waxay isku diyaarineysaa inay bixiso gobolka
Mashruuca Mashruuca-Kirazli wuxuu bilaabay safarka maanta
Raadinta Sawirada Waddooyinka Caalamiga ah
Wasaaradda Gaadiidka: Dhibaatada ugu muhiimsan ee Istanbul ah maaha deegaanka, gaadiidka